Iingcebiso ezili-10 eziphambili zesitokhwe ngoNovemba ka-2021 | Funda isiKhokelo soRhwebo esi-2
UNGAZE UPHUMELELE UKUPHUMELELA
£ 15ngenyanga 1 Ithunyelwe ngenyanga
Fumana iiNgcebiso zeSitokhwe seVIP zoBomi eziSimahla, Vula nje iAkhawunti nge-eToro kwaye wenze idiphozithi, i-imeyile [imeyile ikhuselwe] kunye skrini yemali kwiakhawunti ukufikelela!
Vula Ixabiso lokungena
Izilumkiso ngeziganeko zoQoqosho
Izaziso eziSelfowuni kunye neZilumkiso ngeTelegram kuzo zonke iiMpawu
Ukufikelela ngokupheleleyo kwiiNgxelo zeNtsebenzo eziValiweyo
Bhalisa inzala yakho kunye nediphozithi kunye neqabane lethu, i-FCA elawula i-FX / CFD broker, i-eToro kwaye ufumane iiNgcaciso ze-2 zoRhwebo ngeeVIP zeNtengo SIMAHLA boBomi!
Iingcebiso zeSitokhwe eziBalaseleyo zango-2021 -Ukukhetha njani ezonaStokhwe ziBalaseleyo
Ixesha ledijithali linike abatyali mali bemihla ngemihla ithuba lokuthenga kunye nokuthengisa istokhwe kwintuthuzelo yekhaya lomntu. Ngapha koko, unamawaka esitokhwe onokukhetha kuwo kwiimarike zamanye amazwe.
Eyona nto intle ngayo kukuba kuthatha imizuzu nje ukuthenga izitokhwe kwi-Intanethi- abanye abathengisi bade babonelele ngorhwebo olungenasimahla. Nangona kunjalo, ngokhetho oluninzi etafileni, ukwazi ukuba zeziphi izitokhwe zokongeza kwipotifoliyo yakho kunokuba ngumceli mngeni- ngakumbi ukuba usaqala.
Ngale nto engqondweni, eli nqaku liza kuxubusha ezona ngcebiso zesitokhwe ziqwalaselweyo ngo-2021. Ekufundeni ngeengcebiso zethu zesitokhwe ukusuka ekuqaleni ukuya ekugqibeleni, uya kuba uxhobile ngezixhobo ezifunekayo zokwakha ipotifoliyo yakho yezabelo - kunokuba uthembele Ingcebiso yeqela lesithathu.
Ingcebiso yesitokhwe soku-1: Qonda ukubaluleka kokujonga iiSitokhwe njengoTyalo-mali lweXesha elide
Ngaphambi kokuba sifike kwi-nitty-gritty, kubaluleke kakhulu ukuxoxa ngokubaluleka 'komonde' kwiimarike zesitokhwe. Ngapha koko, umgaqo ngokubanzi wesithupha kukuba kufuneka ucinge ngokubambelela kutyalo mali lwakho kwisithuba seminyaka emihlanu.
Isizathu soku kukuba isitokhwe kunye nezabelo zisebenza kwindawo yentengiso engazinzanga. Oko kukuthi, iimarike ezibanzi zihamba ngeendlela ezininzi kunyaka wonke- zombini ukuya phezulu nasezantsi.
Ngokubalulekileyo, ukungabikho komonde kubangela ukuba abatyali zimali abatsha bathengise izitokhwe zabo kuba ixabiso lazo lehlile. Nangona kunjalo, amaxesha ngamaxesha le ntshukumo iphantsi iya kuba yeyethutyana. Masithathe uTesla njengomzekelo ophambili.
NgoFebruwari 2020, isitokhwe sikaTesla sasixabisa ama- $ 180
Kwinyanga nje enye kamva, kwa ezo stocks zatshona zangama-70 eedola
Ukuba ubuphethwe luloyiko kwaye uphumele ngaphandle ukuya kwinqanaba lama- $ 70, ubuya kujonga kwilahleko ezingaphezu kwama-60%
Ngokukhawuleza kuJanuwari 2021, kwaye isitokhwe seTesla sele saphule i-880 yeedola ngesabelo ngasinye
Kananjalo, ukuba ubuhleli ngokuqinileyo ngoMatshi 2020 kwaye ungathengisanga izabelo zakho ngexesha lolungiso lweemarike zethutyana, utyalomali lwakho ngoku luya kuba ne-388% ngaphezulu
Ekugqibeleni, ngelixa ingezizo zonke izitokhwe eziya kuphinda zibuyele kwinqanaba eliphezulu, ukuba uyakholelwa kwinkampani kwaye uziva ukuba izinto ezisisiseko ziyazithetha, thintela isilingo sokufumana imali ngexesha lentengiso esezantsi.
Ingcebiso yesitokhwe 2: Ukwahluka kubalulekile
Okulandelayo kuluhlu lwethu lweengcebiso zesitokhwe ekufuneka siqwalasele ngo-2021 yeyokwahlukahlukana. Eli gama libhekisa kwinkqubo yotyalo-mali kwizitokhwe ezininzi ezivela kumashishini amaninzi nakuqoqosho. Ngamanye amagama, ngokulandela isicwangciso sokuhluka, uphepha ukubeka onke amaqanda akho kwibhasikithi enye.
Iphothifoliyo yesitokhwe enezinto ezahlukeneyo ezinokubonakala ngoluhlobo:
I-20% yesitokhwe kwinqanaba eliphezulu, iinkampani ze-chip chip (umz. UJohnson noJohnson)
I-20% yesitokhwe kwiinkampani ezikhulayo (umzekelo, iTesla kunye nePara
Ama-50% esitokhwe kwiinkampani ezihlawula izabelo
I-10% yesitokhwe kwii-cap-cap firms (umzekelo ukulinganiswa kweemarike ezingaphantsi kwe- $ 1 yezigidigidi)
Kuluhlu ngalunye kula ngentla, uya kuba nesitokhwe esivela kwiimfumba zamacandelo ahlukeneyo.
Iinkonzo zeBhanki nezeMali
Ngoku, ngokwakha ipotifoliyo eyahlukeneyo, uthatha indlela enobulumko, enobungozi ekutyalomali. Kungenxa yokuba awuchazekanga kakhulu kwinkampani enye okanye kwicandelo elinye.
Umzekelo, xa ubhubhane we-coronavirus waqala ukuzala ekuqaleni kuka-2020, isitokhwe esisebenza kwifayile ye- ioyile kunye negesi, ukuthengisa, kunye namacandelo okuhamba abethwe kakhulu. Ngapha koko, uninzi lusexabisa ngaphantsi kunamanqanaba angaphambi kobhubhane.
Kwelinye icala, isitokhwe setekhnoloji enje ngeAmazon, iApple, uGoogle, uFacebook, kunye nesikwere zonke zikhulile kwiinyanga ezili-12 ezidlulileyo. Inqaku eliphambili apha kukuba ngelixa unokuthi uthathe ukubetha kwisitokhwe esinxulumene nokuhamba, ezi lahleko zinokubalwa kwipotifoliyo eyahlukeneyo enezitokhwe zetekhnoloji.
Ingcebiso yesitokhwe 3: Funda indlela yokwenza Izitokhwe zoPhando
Eyona mpazamo inkulu onokuyenza njengomtyali mali kukulandela "ingcebiso yeengcali" yomntu wesithathu we-tipster. Oko kukuthi, akufuneki utyale imali kwisitokhwe ngenxa yoluvo lomnye umntu. Endaweni yoko, kubalulekile ukuba ufunde ii-ins kunye nokuphuma kwendlela yokuziphanda ngokwakho.
Ngokwenza njalo, unokuqiniseka ukuba utyalo-mali lwesitokhwe lulungele iinjongo zakho zotyalo-mali. Ngoku, njengomtyali mali wexesha elide, awunyanzelekanga ukuba uhlawule kakhulu kuhlalutyo lobuchwephesha. Ngokuchasene noko, eyona nto kugxilwe kuyo kufuneka ibe kwiziseko.
Oku kubandakanya iindawo ezimbini eziphambili ngokukodwa - ezemali kunye nophuhliso lweendaba ezifanelekileyo.
Xa sithetha "ngezezimali", sithetha ngokusebenza kwenkampani ethile. Kwimo yayo esisiseko, oku kubandakanya isixa sengeniso kunye nengeniso evelisayo. Zonke iinkampani zikarhulumente kufuneka zikhuphe olu lwazi ngengxelo yomvuzo rhoqo emva kweenyanga ezintathu. Wonke umntu unokufikelela kolu lwazi ngaxeshanye - aqinisekise ukuba indawo yokudlala efanelekileyo kunye nenqanaba.
Ke, xa inkampani ikhupha ingxelo yayo yengeniso yekota, ulwazi kufuneka luthelekiswe neempawu eziphambili eziphambili. Phambili koku yindlela ingeniso kunye neenzuzo xa zithelekiswa namaxesha angaphambili- esihlala siyikota yokuqala okanye unyaka. Ukongeza, i-metric eziphambili kufuneka zifaniswe noqikelelo ebelusenziwa ngaphambili yinkampani ekuthethwa ngayo.
Umzekelo, ukuba isitokhwe siqikelele ingeniso yekota ye- $ 2 yezigidigidi kodwa ivelise i-2.6 yezigidigidi zeedola- ziindaba ezimnandi ezi. Kananjalo, kuya kufuneka ulindele ukuba iimarike zisabele kakuhle-oko kuthetha ukonyuka kwexabiso lesitokhwe. Nangona kunjalo, ukuba ukusebenza kwemali kubi kakhulu kunokuba iimarike bezilindelwe, kuya kwenzeka okwahlukileyo.
Iindaba zamabali zinakho kwaye ziya kuba nefuthe kwicala lezimvo zentengiso kwistokhwe. Umzekelo, masicinge ukuba ubambe izabelo kwiinkampani ezimbini eziphambili zeoyile- iBP kunye ne-ExxonMobil.
Njengokuba iindaba ezingakumbi nangakumbi zokuthintelwa kohambo kwihlabathi liphela ziye zavela phakathi kwesifo, ucinga ukuba oku kungalichaphazela njani ixabiso lesitokhwe sakho seoyile? Ngaphandle kwamathandabuzo, amasheya athabatha ukuntywila okukhulu ekuqaleni kwe2020.
Ngokufanayo, masicinge ukuba unamasheya e-Facebook kwiphothifoliyo yakho. Xa iindaba zaqhekeka malunga nedatha enkulu kunye nokwaphula imfihlo, ucinga ukuba oku kunefuthe lini kwixabiso lezabelo ze-Facebook? Kwakhona, izabelo zithathe i-hit enkulu.
Ngale nto ithethwayo, ayizondaba nje zeendaba ezimbi omele uzijonge. Endaweni yoko, ukuphuhliswa kweendaba kunokuba yinto elungileyo kwixabiso lesitokhwe.
Umzekelo, xa urhulumente waseKhanada wabhengeza ukuba uceba ukuphumeza imigaqo yasekhaya kwintengiso ye-cannabis yolonwabo, yayiziindaba eziphambili kwisitokhwe esisebenzayo kwibala lezomthetho lomthetho.
Ekugqibeleni, enye yezona ngcebiso zibalaseleyo zesitokhwe esinokukunika zona kukuhlala phambili komdlalo ngokuzigcina wazi izinto eziphambili zeendaba.
Ingcebiso yesitokhwe sesi-4: Yenza iSicwangciso soTyalo-mali kwakhona
Njengoko kusenokwenzeka uyazi, izitokhwe ezininzi zivelisa izabelo. Oku kuthetha ukuba uyakufumana intlawulo evela kwinkampani rhoqo kwiinyanga ezintathu. Ubungakanani bentlawulo buyalelwa ngokusebenza kwefemu nganye.
Umzekelo, ukuba isitokhwe sisebenze kakuhle ngaphezulu kwekota yangaphambili ngokwemali yengeniso kunye neenzuzo zokusebenza, ithuba lokunyuka kwesahlulo esihlawulwayo liphezulu.
Nangona kunjalo, ngaphandle kokufumana okungakanani, abatyali mali abanamava baya kuhlala bephinda befumana izixa zabo. Baza kuhlala bekwenza oku ngokubeka izabelo kwiitokhwe esele benazo.
Makhe sijonge imizekelo embalwa yokuba kutheni ukwenza isicwangciso sokubuyisela imali kwakhona yenye yezona ngcebiso zibalaseleyo zesitokhwe esinokukunika zona.
Masicinge ukuba uneedola ezingama-5,000 ezixabisekileyo kwisahlulo sakho
Ekupheleni konyaka woku-1, ufumene i-7% iyonke kwizabelo
Oku kufikelela kwi- $ 350
Ukuba urhoxisa loo $ 350 ngaphandle kwaye ucinga ukuba ixabiso lezabelo alitshintshanga, uyakusala ne-5,000 zamaxabiso esitokhwe
Kananjalo, ukuba ekupheleni konyaka wesi-2 uphinde ufumane isivuno se-7%, yenye yeedola ezingama-350
Ngoku makhe sijonge ukuba ithini imeko ukuba ubuyile kwakhona kwizabelo zakho ngokuthenga amasheya amaninzi.
Ekupheleni konyaka omnye, uphinde wahlawula kwakhona izabelo zakho ezingama-350 kwii-stock ezongezelelweyo
Oku kuthetha ukuba isitokhwe esipheleleyo osibekileyo simkile kwi- $ 5,000 ukuya kwi-5,350 yeedola
Ekupheleni konyaka wesi-2, isivuno sakho sesahlulo se-7% ngoku sisekwe kutyalo-mali lwesitokhwe se- $ 5,350
Kananjalo, endaweni yokufumana izabelo ze- $ 350 njengakumzekelo wangaphambili, uyakufumana i $ 374
Ngoku, nangona umahluko apha usenokubonakala ngathi ngowomzuzu, ifuthe lesicwangciso sokubuyiselwa kwemali kwisahlulo sinokuqala ngokwenyani-rocket ekuhambeni kwexesha. Kungenxa yokuba uya kuxhamla "kumdla wenzala".
Ngamagama alula, oku kuthetha ukuba kwistokhwe ngasinye osithengayo ngenzuzo yakho yesahlulo, sesinye isitokhwe esiya kuthi ngokwaso sizuze izabelo. Ngamanye amagama, urhola "inzala kwinzala" kwaye ke-ixabiso lepotifoliyo yakho linokukhula ngokukhawuleza.
Ingcebiso yesitokhwe 5: Ixabiso leDola Umndilili woTyalo mali lwakho
Uninzi lwabatyali zimali abatsha abakwaziyo ukujongana nokungazinzi kwexesha elifutshane. Ngokukodwa-kwaye njengoko besesitshilo ngaphambili kwisikhokelo sethu seengcebiso zesitokhwe, abatyali mali abangenamava bahlala behendeka ukuba bathengise izabelo zabo xa iimarike ziyehla. Kwiimeko ezininzi, oku kunokuba yimpazamo enkulu.
Iindaba ezimnandi zezokuba kukho incam yesitokhwe elula eya kukuvumela ukuba ungayikhathaleli kwaphela imeko yokudlala kwiimarike- ukulinganiselwa kwexabiso ledola.
Kwindlela yayo esisiseko, ixabiso leedola le-avareji sisicwangciso esigxile kutyalo-mali oluncinci, kodwa rhoqo. Ngamanye amagama, endaweni yokutyala imali yakho eseleyo kwiimarike zamasheya njengesixa semali, uya kuthenga inani elinengqiqo lesitokhwe rhoqo. Umzekelo, unokuthatha isigqibo sokutyala imali eyi- $ 100 kwiimarike zamasheya ekupheleni kwenyanga nganye-ukuphinda inkqubo iminyaka elishumi.
Ngokwenza njalo, uya kufumana ixabiso lesitokhwe elahlukileyo kutyalo-mali ngalunye oluya kuthi kwakhona lilinganise ixabiso lakho lilonke. Oku kuthetha ukuba xa iimarike zikwindlela esezantsi, uya kuba nakho ukuthenga izitokhwe ngexabiso eliphantsi. Ewe, xa iimarike zentengiso zikulungele, uya kuhlawula ixabiso eliphezulu.
Uthenga i-Apple stocks ngoJanuwari 2021 nge- $ 130
Uthenga izitokhwe zeApple ngoFebruwari 2021 nge- $ 140
Uthenga i-Apple stocks ngo-Matshi 2021 nge-100 yeedola
Uthenga i-Apple stocks ngo-Epreli 2021 nge- $ 120
Ngokomzekelo ongentla- kwaye ucinga ukuba utyale imali ngokulinganayo ngalo lonke ixesha, amaxabiso avareji kwixabiso lesitokhwe seApple yi- $ 122.50. Inqaku eliphambili apha kukuba iindleko zeedola ezilinganiselweyo zithintela ukungalali ebusuku malunga nokuhla kweentengiso.
Icebo lempahla yesitokhwe 6: Khangela iiStock ezingaphantsi kwexabiso
Enye yeengcebiso zesitokhwe ezibaluleke kakhulu esinokukunika zona kukufunda ngenkqubo yokufumana izitokhwe "ezingabalulekanga". Ngamanye amagama, khangela isitokhwe esinexabiso lesabelo sangoku elingaphantsi kwexabiso langaphakathi.
Ewe kunjalo, ukukwazi ukwenza lo mgwebo akukho lula xa uyi-newbie. Ngale nto ithethwayo, ukuba nolwazi olusisiseko lwee-stockmarket ezingqinelanayo zinokukunceda apha endleleni.
Ixabiso kumaxabiso emivuzo (P / E)
Ixabiso kumyinge womvuzo (P / E) uhlala ubalwa ukuya ekufumaneni istokhwe esingaxabisekanga.
Uyayisebenzisa, kuya kufuneka wenze oku kulandelayo:
Fumana ixabiso langoku lempahla ekuthethwa ngayo
Fumana umvuzo-ngesabelo ngasinye
Yahlula ixabiso lentengo ekhoyo ngoku kwi-share-share-share
Emva koko uya kushiywa ngomlinganiselo. Umzekelo, ukuba ixabiso lentengo langoku li- $ 50 kwaye i-share-share-share is $ 10, oku kuthetha ukuba umlinganiselo we-P / E ngu-5.
Inkqubo yohlalutyo ayimisi apha- njengoko ufuna ukwazi ukuba umlinganiso umeleni na. Kananjalo, kuya kufuneka ukuba ufumanise ukuba yeyiphi i-avareji ye-P / E yomyinge kushishino olusebenzayo apho isitokhwe sisebenza khona.
Umzekelo, masicinge ukuba lo mzekelo ungasentla uhambelana nezitokhwe zebhanki zase-US. Ukuba umndilili we-P / E umzi-mveliso kweli shishini uli-10 kwaye isitokhwe sakho sinomyinge wesi-5, ke oku kungabonisa ukuba asixabisekanga.
Iindaba ezimnandi zezokuba awudingi nokwenza ukubala ngokwakho kwezi ntsuku. Kungenxa yokuba unokufumanisa ngokulula ukuba yintoni umlinganiso weP / E ngokwenza uphando olukhawulezileyo lukaGoogle.
Uya kuboniswa iimfumba zeendaba ezaziwayo zeendaba zewebhusayithi ezingabonisi kuphela umyinge we-R / E kwisitokhwe sakho osikhethileyo kodwa zininzi ezinye iimetrikhi eziphambili zokwenza ingxelo.
Ixabiso kwiRatio yeNcwadi (P / B)
Mhlawumbi ukubala okuluncedo ngakumbi okunokukunceda ufumane amasheya angaxabiswanga kukuba lixabiso ukubhukisha umyinge. Eli nani liza kuthatha ixabiso lesabelo lenkampani lize ke lahlule libe “lixabiso leencwadi.
Ixabiso lencwadi kwistokhwe lijonga ixabiso lilonke lempahla
Amatyala ewonke angaphantsi
Yahlula iziphumo ngenani lezabelo ezisasazwayo
Umgaqo oqhelekileyo wesithupha kukuba ukuba ushiywe ngomyinge ongaphantsi kwe-1, isitokhwe ekuthethwa ngaso sinokungaxatyiswa.
Ingcebiso yesitokhwe sesi-7: Cinga ngendlela yokuTyala imali kwiStock
Xa isiza kuwo-eyona njongo iphambili yokutyala imali kwizitokhwe ukwenza imali. Kananjalo, ukuba uyi-newbie epheleleyo, akunakulunga ukuba uthathe umthwalo wokukhetha nokukhetha isitokhwe ngokwakho. Endaweni yoko, kutheni ungaqwalaseli nje uhlobo lwengeniso?
Oku kuthetha ukuba awuzukufuna ukufunda i-ins kunye nokuphuma kwendlela yokwenza iinkampani zophando, kwaye awuzukufuneka ugcine ulwazi ngeendaba zangoku zeemarike. Endaweni yokuba ungahlala phantsi kwaye uvumele imali yakho ukuba isebenzele nina.
Ukuba uyasithanda isandi sale ncoko yesitokhwe, ezona ndlela zikhethiweyo kwitafile zezi zilandelayo:
Iimali zeeNkcazo ze-ETF
Iimali zesalathiso zinoxanduva lokulandela umkhondo kwiimarike zesitokhwe ezibanzi. Umzekelo, i-S & P 500 sisalathiso esikhangela iinkampani ezinkulu ezingama-500 ezidweliswe e-US. Oku kubandakanya ukuthandwa kweAmazon, Apple, Facebook, Microsoft, kunye nePaypal. Emva koko unayo i-NASDAQ 100-elandelela iinkampani ezili-100 ezinkulu kwi-stock exchange yegama elifanayo.
Mininzi eminye imizekelo emininzi. Inqaku eliphambili kukuba endaweni yokutyala imali kukhetho oluncinci lwesitokhwe, imali yesalathiso ikunika ukubonwa kwiindawo ezininzi, ukuba ayingamakhulu eenkampani. Eyona nto ilunge kakhulu, xa utyala imali kwisalathiso semarike yemasheya nge- ETF (Ingxowa-mali yokurhweba ngokutshintshiselana), unokuyigqiba inkqubo ngorhwebo olunye
Kulabo abangaziyo, umboneleli we-ETF (umzekelo, iShares okanye iVanguard) uya kuzithengela ngokwakhe zonke izitokhwe ezidweliswe kwisalathiso. Umzekelo, ukuba ujonge ukutyala imali kwi-Dow Jones 30, i-ETF iya kuthenga izabelo kuzo zonke iinkampani ezingama-30.
Oku kuyakulinganiswa ukubonisa isalathiso sokwenyani. Umzekelo, ukuba i-4% ye-Dow Jones 30 yabelwe i-Salesforce, i-4% yebhasikithi ye-ETF nayo iya kubamba izabelo kwi-Salesforce. Ukuba isalathiso esichaphazelekayo songeza okanye sisusa isitokhwe, njengoko kuya kubonelela ngomboneleli we-ETF.
Olunye ukhetho olongezelelekileyo onalo "kukuThengisa ngokuThengisa". Eli linqaku elinikezelwa ngumrhwebi olawulwayo we-eToro. Njengoko igama lisitsho, uya kukopa omnye umsebenzisi we-eToro uthanda izinto ezinje.
Umzekelo, unokufumana umthengisi wesitokhwe onerekhodi ebalaseleyo eqongeni. Emva koko, unokuthatha isigqibo sokutyala imali eyi- $ 2,000 kumntu ngokusebenzisa isiXhobo sokuThengisa.
Ngokwenza njalo, uya kukopa kwangoko ipotifoliyo yomrhwebi ngesixa esilinganayo noko utyale imali.
Masizidilize izinto ezisisiseko zeli phepha lesitokhwe ngokweenkcukacha ::
Utyalomali- $ 2,000 kumthengisi wesitokhwe e-eToro
Umrhwebi uneepesenti ezingama-50 zepotifoliyo kwizabelo ze-IBM. I-30% ikwi-Twitter kunye ne-20% kwiWalmart.
Kwelinye icala, iphothifoliyo yakho iya kwabela i-1,000 yeedola kwi-IBM (50%), iidola ezingama-600 kwi-Twitter (30%), nakwi- $ 400 kwiWalmart (20%).
Emva koko, unokukhetha ukukopa zonke izikhundla eziqhubekayo njengokuthanda izinto. Umzekelo, ukuba umrhwebi uthengisa isikhundla sakhe kwiWalmart aze athenge izabelo kwiApple, iphothifoliyo yakho iyakubonisa oku.
Ekugqibeleni, ukhetho lweKopi yokuRhweba yindlela esebenzayo yokurhweba kwiimarike zamasheya. Kungenxa yokuba ii-ETFs zisebenza kuphela "ekulandeleleni" imakethi ethile, ngokuchaseneyo nokuyiphumelela. Umzekelo, ukuba i-ETF ilandelela i-Dow Jones kwaye isalathiso siyehla nge-10%, i-ETF iya kwehla ngenani elifanayo.
Ingcebiso yesitokhwe 8: Musa ukoyika ukuthengisa ngokufutshane kwiStock esiwa
Nangona olu kongezwa ngokukodwa kwisikhokelo sethu seengcebiso zesitokhwe ayizukuba yeyomntu wonke-kufanelekile ukuqaphela nangona kunjalo. Ukubeka ngokulula, ukuthengisa okufutshane kubhekisa kwinkqubo yokuthelekelela ukuba isitokhwe siza kwehla ngexabiso. Oku kukuphola okupheleleyo okuchasene nesicwangciso sotyalo-mali lwexesha elide, njengoko unethemba lokuba izitokhwe ziya kwanda.
Nangona kunjalo, nanjengoko besigubungele ngaphambili, amasheya aya kuhamba ngeendlela-zombini emantla nasemazantsi. Ngokuqinisekileyo, abatyali mali bexesha elide abakhetha indlela yokungenzi izinto baya kuhlala beqinile ngokuchaseneyo nokuxhalaba malunga nexesha elifutshane.
Kodwa, ukuba uqinisekile ukuba isitokhwe sinokuhla - ubuncinci ngexesha elifutshane, kutheni ungazuzi kule nto?
Umzekelo, masithi ubambe isitokhwe kwinkampani yamayeza esebenza kwisitofu sokugonya se-coronavirus.
Nangona kunjalo, iindaba ezaphula iindaba zokuba i-US Food and Drug Administration iye yanqumamisa uvavanyo lwezonyango lwenkampani ngenxa yezokhuseleko.
Kwelinye icala, konke-kodwa-okuqinisekileyo ukuba isitokhwe siza kuqala ukwehla xa iimarike ziphinda zivulwa kusasa.
Njengokungasentla, urhwebo olunobuqili ngaphandle kwamathandabuzo lwaluya kujonga kuthengiso olufutshane kwisitokhwe samayeza esixutyushwayo. Ukwenza oku, konke okufuneka ukwenze kukusebenzisa umthengisi we-CFD kwi-Intanethi. Kungenxa yokuba iiCFD zikuvumela ukuba uthengise iinkampani ezimfutshane nge "oda yokuthengisa".
Ingcebiso yesitokhwe 9: Qonda ukuba isebenza njani iMali yoTyalo-mali
Ngaphambi kokuba uqalise uhambo lwakho lwexesha elide lotyalo-mali, enye yezona ngcebiso zibalaseleyo zesitokhwe esinokukunika zona kukuqinisekisa ukuba uyaziqonda ukuba zisebenza njani iifizi zokurhweba kwi-intanethi. Emva kwayo yonke loo nto, umrhwebi wakho omkhethileyo unikezela ngenkonzo- ke kufuneka ihlawulise umrhumo othile.
Ezona ntlawulo zibalulekileyo ekufuneka uziqwalasele ziikhomishini kwaye zisasazeka.
Uninzi lwabarhwebi be-stock online bahlawulisa ikhomishini. Oku kunokwenzeka ngentlawulo ethe tyaba okanye ipesenti. Ukuba yeyokuqala, uya kuhlawula umrhumo ofanayo kurhwebo ngalunye- nokuba utyala imali kangakanani.
Umzekelo unokuhlawula i- $ 10 ukuthenga istokhwe sakho osikhethileyo kunye nenye i- $ 10 xa uphuma. Olu lwakhiwo lwekhomishini lulunge ngakumbi kwabo batyala imali eninzi.
Ngenye indlela, umrhwebi wakho omkhethileyo unokufumana ikhomishini eyahlukileyo endaweni ephindaphindwe yibango lakho. Umzekelo, inokuhlawulisa iipesenti ezi-0.5- oko kuthetha ukuba utyalomali lwesitokhwe esiyi- $ 2,000 luya kukubiza i-10 yeedola. Oku kunceda abo batyala imali encinci, njengoko ungakhange ubethwe ngumrhumo osisigxina.
Ukusasazeka kubalulekile ukuba uqwalasele xa ucinga ukuba uhlawula malini ukuze utyale imali. Lo ngumahluko phakathi kwesibhidi kunye nokubuza ixabiso lesitokhwe.
Ixabiso lokubhida lelona xabiso liphezulu umthengi aya kulihlawula kwisitokhwe
Ixabiso lokubuza lelona xabiso lisezantsi eliza kwamkelwa ngumthengisi kwisitokhwe
Lo msantsa kumaxabiso uya kuba nefuthe ngqo kwiingeniso zakho ezinokubakho. Umzekelo, ukuba umrhwebi wakho ucaphula a sasaza ye-2%, kwithiyori, oku kuthetha ukuba kufuneka uzuze nge-2% kutyalo-mali lwakho ukuze uphule.
Into onokuyifumana kukuba umthengisi wakho omkhethileyo akahlawulisi nayiphi na ikhomishini, kodwa bayenzela oku ngokusasazeka okubanzi. Kananjalo, kulungile ukuba uvavanye ukuba yintoni le, ngaphambi kokuba wahlukane nemali yakho.
Ingcebiso yesitokhwe 10: Fumana uMrhwebi oMkhulu
Sukuyenza impazamo ngayo - ukuze ufikelele kwiimarike zesitokhwe zehlabathi, kuya kufuneka uhambe ngomthengisi okwi-Intanethi. Ukuhamba ngo-2021, ngoku kukho amakhulu wabarhwebi abasebenza kwesi sithuba. Ezinye zaziwa ngakumbi kunabanye, ubukhulu becala ngenxa yemirhumo ephantsi kunye nokusasazeka.
Nangona kunjalo, kuya kufuneka ujonge ezinye iindlela, ezinje:
Zeziphi iistokhwe umrhwebi akunika ukufikelela kuzo
Ubuncinci bedipozithi kunye nebhalansi yeakhawunti
Iindlela zokuhlawula ezixhaswayo kunye nemirhumo enxulumene noko
Ngawaphi amaqumrhu emali umrhwebi anikwe iphepha-mvume lokuba akho
Nokuba umrhwebi unikezela ngezixhobo zophando kunye nohlalutyo
Umsebenzisi ulunge kangakanani kumthengisi
Lilonke, ukufumana i-broker efanelekileyo kwiimfuno zakho kunokuba yinkqubo echitha ixesha.
Ukukunceda endleleni, ngezantsi uya kufumana ukhetho oluncinci lwabarhwebi abafanele ukuqwalaselwa.
1. I-Capital.com - Ukusasazeka kweKhomishini kunye noKhuphiswano
Njenge-EightCap ,. I-Capital.com liqonga lokurhweba leCFD eligqibeleleyo kwizikhundla zexesha elifutshane. Umboneleli ubonelela ngelayibrari yesitokhwe ebanzi kakhulu- ke maninzi amathuba okuhambisa isicwangciso sakho sokurhweba esikhethiweyo.
Awuyi kuhlawuliswa nayiphi na ikhomishini kwi-Capital.com, kwaye ukusasazeka ngokubanzi kukhuphisana kakhulu. Ngokukodwa, iCapital.com lukhetho olunengqondo ukuba uthengisa isitokhwe okokuqala ngqa. Kungenxa yokuba iqonga lifuna idipozithi encinci ye- $ 20 nje.
Eli lixabiso elingabalulekanga emngciphekweni- oko kuthetha ukuba uqala kancinci ngelixa ufikelela kwinto ebandakanya isitokhwe seCFD. Ukongeza, iCapital.com yamkela ubuninzi beendlela zokuhlawula zemihla ngemihla-kubandakanya i-debit / amakhadi etyala kunye ne-e-wallets.
Izitokhwe zorhwebo ngaphandle kwekhomishini
Ilawulwa zizo zombini i-FCA, i-CySEC, i-ASIC, kunye ne-NBRB
Ayikwazi ukuthenga amasheya ngengqondo yesiko
Esi sikhokelo sichaze iingcebiso zesitokhwe ezili-10 eziya kuqinisekisa ukuba uqala eyakho isabelo sokujongana hamba unyawo lwasekunene.
Sigubungele yonke into ukusuka ekufundeni indlela yokufunda iingxelo zengeniso yenkampani kunye nokuhlala phambili kwiindaba ezifanelekileyo zezemali, ukuhambisa isicwangciso sokubuyisela imali kunye neKopi yokuRhweba.
Ngokubalulekileyo, sikwathethile ngokubaluleka kokukhetha umthengisi wempahla ofanelekileyo. Emva kwayo yonke loo nto, ii-brokers zenza ibhulorho phakathi kwakho notyalo mali olukhethileyo lwentengiso.
Zeziphi ezona stock zilungele ukuthengwa kwabaqalayo?
Ukuba ungumqali opheleleyo, ungcono kakhulu ukuba ugxile kwisitokhwe se-chip-blue. Ezi zizitokhwe ezikhulu ezinengxelo eqinisekisiweyo kwishishini labo.
Uzifumana njani izitokhwe ezingenaxabiso?
Kukho iindlela ezininzi onokuzifumana kwisitokhwe esingaxabisekanga- uninzi lwazo lujolise kwimilinganiselo yezemali. Oku kubandakanya umlinganiso weP / E kunye noP / B.
Uyenza njani ixesha kwimarike yemasheya?
Akukho ndlela ilula yokufumana ixesha kwiimarike zamasheya. Emva kwayo yonke loo nto, imikhwa ihlala ihamba ngendlela engalindelekanga.
Liliphi elona xesha lilungileyo lokutyala imali esitokisini?
Nangona abanye abatyali mali bekhetha ixesha lokuthengisa kwi 't', akukho sizathu sokuba ungabinakho ukuqala ukuthenga amasheya namhlanje. Kungenxa yokuba unokuhambisa isicwangciso esiphakathi seendleko zedola- oko kuthetha ukuba uya kuba utyala imali ngokuthozamileyo, kodwa imali eqhelekileyo kwiimarike.
Ukuhlaziywa kokugqibela: Novemba 4th, 2021